टेलिभिजन प्रस्तोताको रोमाञ्चकारी प्रेम « Pen Nepal
टेलिभिजन प्रस्तोताको रोमाञ्चकारी प्रेम
Published On : 11 January, 2021 5:41 pm By : पेननेपाल
एजेन्सी । जोइ एसेक्स चर्चित बेलायती टेलिभिजन पर्सनालिटी हुन् । २०११ देखि २०१३ सम्म उनी आईटिभी रियालिटी शृंखला ‘द अन्ली वे इज एसेक्स’ मा देखिएका थिए ।
एक अमेरिकी ब्यापारीको स्टेम सेल प्रत्यारोपण, १८० वर्ष बाच्ने विश्वास
एजेन्सी । अमेरिकी व्यापारी तथा न्यूयोर्क टाइम्सका बेस्टसेलिङ राइटर डेव एस्प्रले आफ्नो शरीरको बोन म्यारोबाट
७ प्रेमिकालाई एकैसाथ गर्भवती बनाउने यी युवक
एजेन्सी । उनी स्टन्टका राजा भन्ने उपनामले पनि परिचित छन् । उनी जहाँ जान्छन् विवाद
एजेन्सी । पृथ्वीमा अरबौँको संख्यामा जीवजन्तुहरु छन् । यी असंख्य जीवहरुको आ(आफ्नै विशेषता र क्षमता
एक जना युवतीसंग दुई युवाको प्रेम ! कसरी भयो संभव ?
एजेन्सी । यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ पत्याउने नसकिने घटना हुन्छन् । ब्राजिलमा त्यस्तै भएको छ ।